Amlapura city, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Karangasem
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Tanàna Amlapura
Tanànan'i Amlapura taloha
Topimaso momba ny tanànan'i Amlapura taloha
Any amin'ny faritra atsinanana any Bali, amoron-tsiraka. Tamin'ny andro taloha dia renivohitry ny fanjakana kelin'i Karangasem izy io. Vitsy ny mpizahatany, tsy misy ny fitohanan'ny fifamoivoizana, nefa miaraka amin'izay koa tsy dia mivoatra ny fotodrafitrasa. Na izany aza, i Amlapura dia mety hahaliana ny mpankafy tantara sy kolontsaina.
Ny halaviran'ny Denpasar mankany amin'ity tanàna ity dia 70 km. Amin'ny fiara fitateram-bahoaka dia azonao atao ny mandresy azy ireo ao anatin'ny 2,5 ora, amin'ny fiara - haingana kokoa.
Tontolo iainana an-tanàna
Amlapura no ivom-pitaterana lehibe any atsinanan'i Bali. Na izany aza, tanàna kely mangina izy io. Tery ny arabe rehetra ary tsy misy ny fivezivezena mafy. Madio izy io, mety amin'ny tongotra. Nahazo ny loka aza i Amlapura noho izy tanàna kely madio indrindra nanerana an'i Indonezia. Na dia milamina sy refesina aza ny fiainana eto dia manana trano fandraisam-bahiny maoderina sy toeram-pizahan-tany hafa ity tanàna ity. Azonao atao ny mandeha any amin'ny bazaar eo an-toerana, izay misy sakana iray manontolo. Ho fanampin'ny vokatra mora dia eo aminy no ahatsapanao ny rivo-piainana manokana eto an-tanàna. Ity no toerana tsara indrindra handinihana ny fomba amam-panaon'ny mponina eo an-toerana.
Ny tena manintona an'i Amlapura dia ireo lapa taloha misy maritrano am-boalohany. Manokana, ny Puri Agung Palace dia misokatra ho an'ny mpitsidika rehetra. Natsangana tamin'ny taona 1900 izy io ary nanorim-ponenana ny mpitondra teo an-toerana tamin'izany fotoana izany. Misokatra ho an'ny besinimaro ity lapa ity manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 17 hariva. 10 000 ropia ny fidirana. Misy lapa 2 hafa eo akaiky eo - Puri Gede sy Puri Kertasura. Na izany aza, tsy misy mahazo avela ao anatin'ireny zavatra ireny. Ny tena izy dia ny taranaky ny rajas eo an-toerana no mbola miaina ao.
Lapan'i Puri Agung
Mode mode: manomboka amin'ny 6.00 a.m ka hatramin'ny 21.00 p.m. isan'andro
telefaonina: + 62 363 21364
Tsy misy zavatra hafa azo jerena ao Amlapur. tanàna toa tanàna. Misy morontsiraka Karangasem mahafinaritra eo akaiky eo, ary koa ny malaza lapa rano Taman Ujung
Tanàna Amlapura. Fijery zanabolana
Ny tanànan'i Amlapura taloha dia eo atsinanan'ny Bali, akaikin'ny distrikan Karangasem, renivohiny izay tamin'ny andro taloha.
adiresy: Amlapura, Bali, Indonezia
mandrindra: -8.446425, 115.613557
Sarin'ny tanànan'i Amlapura
Ny tanànan'i Amlapura taloha
Tanàna amlapura amin'ny sari-tanety
Tanàna Amlapura amin'ny sarintany Bali
Puri Agung Karangasem - araka ny nosoratan'ny mpandeha hafa dia ity no lapan'ny mpanjaka farany Bali. Ankehitriny maro ny fianakaviana eo an-toerana no miaina amin'ny faritaniny; ny lapan'ny mpanjaka mihaosa. Ny tranon'ny lapa dia mila fanavaozana, ny dobo dia mila fanadiovana, amin'ny ankapobeny dia be ny asa tsy maintsy atao.
Ny lapa dia toa tsy nahaliana anay manokana, fa rehefa avy nandeha teny amin'ny làlana sy nidina ny tohatra somary nidina izahay dia nankany amin'ny lampihazo, izay nanokafana ny fahitana mangatsiaka ny manodidina. Teo koa ny loharano misy trondro, trondro maro dia lehibe dia lehibe (30 santimetatra), ary misy koa tranom-borona misy vorona samy hafa. Angamba nisy terasin'ny mpanjaka taloha.
Raha tsy ity toerana ity dia apetrako 2 avy amin'ny 5, ary avelao ho 4. Mety tsara hifaneraserana amin'ny tantaran'ny Bali io toerana io. Na izany aza, mamporisika anao aho hitsidika azy io amin'ny alàlan'ny fitaterana ihany, azo antoka fa tsy mendrika ny mandeha manokana eto.